🥇 Mmemme maka ọrụ ụgbọ
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 113
Mmemme maka ọrụ ụgbọ
Video nke usoro ihe omume maka ọrụ ụgbọ
Dezie mmemme maka ọdụ ọrụ
Njikwa ụlọ ọrụ ọrụ abụghị ọrụ dị mfe ma chọọ oge na akụrụngwa dị ukwuu, ọkachasị mgbe ụlọ ọrụ ahụ na-amalite ịgbasawanye azụmaahịa ya, na-enye ndị ahịa ya ọtụtụ ọrụ dị iche iche nke ọ bụla chọrọ njikwa dị iche, nyocha, na mpempe akwụkwọ na usoro ọ bụla nke nrụzi ụgbọ ala ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ọzọ a na-enye n'ọdụ ụgbọ.
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-ahụ maka ọdụ ụgbọ ala na-anwa ịchọta mmemme nke ga-enyere ha aka ịhazi usoro ọrụ ọrụ yana belata ọrụ ole na-agwụ ike ịrụ ma nwee ejiri aka mee ya ma obu na akwukwo ma obu na ngwangwa akuko dika MS Word ma obu Excel. Forchọ ihe omume dị otú ahụ abụghị ihe dị nfe dị mfe ebe ọ bụ na ọnụọgụ nhọrọ dị n'ahịa maka azụmaahịa na njikwa ihe omume dị elu, mana ogo dịgasị iche nke na ọ ga - abụ nsogbu dị mkpa. Onye ọchụnta ego ọ bụla chọrọ naanị ihe kachasị mma maka azụmahịa ha na nke ahụ bụ ihe kwere nghọta n'ihi na enweghị ezigbo akpaaka ọ gaghị ekwe omume ịgbasa azụmahịa nke ụlọ ọrụ na-enweghị ịchụ ọtụtụ oge na ihe onwunwe na ndị ọrụ ga-arụ ọtụtụ ọrụ ederede. Na mgbakwunye na - njikwa akwụkwọ ntuziaka na-enweghị iji mmemme ọ bụla eme ihe ngwa ngwa nke na-eme ka ndị ahịa chere ogologo oge - nke ahụ abụghịkwa ihe ndị ahịa na-amasị. Ha ga-ahọrọ ileta ụlọ ọrụ ọrụ ọ bụla ọzọ nke ga-ejere ha ozi ọsọ ọsọ ma rụọ ọrụ nke ọma karịa nke na-ejikwa akwụkwọ ntuziaka eme ihe dị ka usoro isi nyocha ya.
Dị ka anyị kwubiri na mbụ, ọ gaghị ekwe omume ịbụ ọbụna asọmpi dịtụ n'ahịa na-ejighị ụdị ngwanrọ ọ bụla, mana iburu otu bụ nnukwu ọrụ siri ike n'onwe ya. Ọ hapụrụ anyị ajụjụ - olee mmemme anyị nwere ike ịhọrọ? Kedu ihe ruru eru dị ka ezigbo usoro nyocha ma ọ bụ nke ọjọọ? Ka anyị kwatuo ya site na ihe anyị chọrọ sọftụwia dị etu a ị ga-eme na mbụ.
Lọ ọrụ ọrụ ọ bụla chọrọ mmemme nke ga-enwe ike ijide ọdụ data ya yana ozi na-aga ngwa ngwa na nke ọma. Ike ịchọta ụdị ozi ọ bụla bụ aha onye ahịa, ụbọchị nleta, ụdị ụgbọ ala ha, ma ọ bụ ụdị ọrụ enyere ha dị oke mkpa mgbe ị na-emeso ndị ahịa ma ọ bụ ndị nsogbu. Ihe omume dị otú a kwesịrị inwe ike ịrụ ọrụ na ọdụ data dị ọsọ ọsọ, mana gịnị ka achọrọ iji wee nweta nke ahụ? Nke mbu - interface onye ọrụ nke dị mfe na nghọta nke na-agaghị ewe oge iji mụta ma jiri ya na nke abụọ mmemme ahụ ga-ahazi nke ọma, yabụ na ọ chọghị ngwaike kọmputa kachasị ọhụrụ iji rụọ ọrụ ngwa ngwa. Na ijikọta ihe abụọ a anyị nwere ike nweta arụmọrụ na ngwa ngwa na nchekwa data.
Ọzọ, anyị chọrọ ijide n'aka na mmemme anyị nwere ike ikpokọta ma kọọ akụkọ data ego niile nke ụlọ ọrụ ọrụ na-arụ kwa ụbọchị, kwa ọnwa, ma ọ bụ ọbụlagodi kwa afọ ebe ọ bụ na enweghị akụkọ ndị dị otú a ọ na-esiri ike ịhụ ike na adịghị ike nke ụlọ ọrụ yana uto na mmepe ya na oge. Iji ozi dị otú ahụ na-enye ohere ịme ezi mkpebi ma nwee mmetụta azụmaahịa yana ịhụ ihe ụlọ ọrụ ahụ nwere na karịa. Ọ bụrụ na usoro nlekọta nke nhọrọ ga-ewepụtakwa eserese na akụkọ ndị a na-ewu ya doro anya ma dị nkenke ọ ga - abụ nnukwu uru ịnwe na ihe ọtụtụ ndị ọchụnta ego na-amalite na-eche banyere mgbe ha na-ahọrọ ngwanrọ ziri ezi maka ụlọ ọrụ ha
Mgbe ahụ, nnukwu ihe ọzọ achọrọ na usoro nlekọta ga-ezute bụ njirimara onye ọrụ. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ka ọ bụghị nnukwu nsogbu na mbụ - ọ bụ n'ezie otu n'ime ihe kachasị na ịhọrọ ngwa kwesịrị ekwesị maka ọrụ ahụ. Usoro mmemme dị mma nwere nghọta dị mfe ma dị mfe nghọta nke onye ọ bụla ga-aghọta, ọbụlagodi ndị nwere obere ahụmịhe na-arụ ọrụ na ngwa kọmputa na ngwanrọ maka njikwa azụmahịa, ma ọ bụ ọbụlagodi ahụmịhe na kọmputa n'ozuzu. Inwe njirimara onye ọrụ nke dị mfe nghọta dị mkpa iji chekwaa oge na akụrụngwa na ndị ọrụ ọzụzụ etu esi eji ya yana n'ozuzu ha bụ nnukwu mgbakwunye na mmemme azụmaahịa ọ bụla.
Mgbe anyị tụlesịrị ihe niile anyị kwurula na mbụ, anyị chọrọ iwebata gị ngwanrọ ngwanrọ anyị pụrụ iche nke emere maka ihe niile anyị kwuru n'elu - USU Software Ihe omume anyi abughi nani ihe nile ekwuru na mbu mana otutu na otutu ihe, nke gha abu oke enyemaka nye ndi oru ugbo ala.
Site na enyemaka nke USU Software, ọ ga-ekwe omume ịhazi otu ndị ahịa dị n'otu. Ga-enwe ike ịchọta ndị ahịa ọ bụla na ịpị aka ole na ole site na aha ha, nọmba ụgbọ ala, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. A ga-echekwa ozi gbasara ndị ahịa niile na nchekwa data pụrụ iche nke enwere ike jikọọ na ịntanetị iji jikwaa ọtụtụ ebe ọrụ n'otu oge.
Mmemme anyị nwekwara ike ịdekọ data maka ndị ahịa a ga-eje ozi ma mesịa chetara ha ọrụ ahụ site na izipu ozi olu, SMS, ma ọ bụ ọbụlagodi ‘Viber’. N'iji mmemme anyị, ọ ga-ekwe omume ịgbakọ ụgwọ ọrụ maka ndị ọrụ gị na ọtụtụ ihe na-echebara mgbe ị na-eme ngụkọta ahụ, dị ka ụdị ọrụ ha rụrụ, ọnụọgụ nke oge ndị ha nọrọ na ọrụ ahụ, yana ogo ya.
Budata USU Software taa ma bido rụọ ọrụ azụmahịa gị ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma!
Ọrụ ụgbọ ala na akụkụ akpaaka
na-aza ajụjụ n'ụlọ ọrụ
Na-aza ajụjụ maka ụgwọ mmezi ya
na-aza ajụjụ n'ime ọrụ ụgbọ ala
ịkwụ ụgwọ maka ịrụzi ụgbọala
aza ajụjụ maka ịrụzi ụgbọ ala
mmezi ego maka ịrụzi igwe
ngụ maka mmezi ụgbọala
Ndekọ ego nke ọrụ n’ụlọ ọrụ
Iwu nnabata nke nyefe maka ndozi
Omume nke ịnata ụgbọ ala
Ngwa maka ọdụ ọrụ
akpaaka maka ọdụ ọrụ
Ngụkọta oge nke ọrụ ụgbọ ala
Mmemme gbakọọ maka ọrụ ụgbọ ala
Mmezi ụgbọ ala na mmezi mmezi
Ngwanrọ na-agụzi ụgwọ ụgbọ ala
Nyocha ọrụ ụgbọ ala
Servicegbọ ala ọrụ
njikwa ọrụ ụgbọ ala
Ebe nchekwa data ọrụ ụgbọ ala
Oge ọrụ ụgbọ ala
Uru ọrụ ụgbọ ala
ngwa oru nke ugbo ala
Akwụkwọ nnabata ụgbọ ala
Emefe ụgbọ ala
Njikwa na ọdụ ọrụ
Njikwa ụgbọala maka ịrụzi
Njikwa nke ndozi arụ ọrụ
Njikwa ọrụ n'ime ọrụ ụgbọ ala
Ahịa ahịa na ọrụ ụgbọ ala
Etu esi edobe ihe ndekọ nke ọrụ ụgbọ ala
Mmemme ihe omume igwe
Usoro ndozi igwe na ndozi ya
njikwa maka ọrụ ụgbọ ala na ịzụ ụgbọ ala
Nlekọta ụlọ ọrụ ọrụ
Usoro njikwa maka ọdụ ọrụ
Mmemme maka akpaaka ego
Mmemme maka ịchekwaa ụlọ ahịa akụkụ akpaaka
Mmemme maka ịza ajụjụ maka ụlọ ọrụ ọrụ
Mmemme maka ọrụ akpaaka
Mmemme maka akụkụ akpaaka
Mmemme maka ngwa ahịa akụkụ akpaaka
Mmemme maka ịgbakọ ọnụ ahịa mmezi ụgbọ ala
Mmemme maka ịgbakọ awa
Mmemme maka ịrụzi ụgbọ ala
Mmemme maka ịre ahịa ndị ahịa maka ọrụ ụgbọ ala
Mmemme maka imezi ụgbọala
Mmemme maka igwe ndozi
Mmemme maka ire akụkụ akụkụ akpaaka
Mmemme maka ọdụ ọrụ
Mmemme maka mgbakoro akụkụ akụrụngwa
Mmemme maka azụmaahịa maka akụkụ akpaaka
Mmemme maka nkwakọba ihe nke akụkụ akpaaka
Dekọọ na ọdụ ọrụ
Arịrịọ maka ọrụ ụgbọ ala
Arịrịọ maka ọdụ ọrụ
Nlekọta ọdụ ọrụ
Akụ azụmaahịa azụmaahịa akụkụ
Sistemụ maka njikwa maka ọdụ ọrụ
Sistem maka igwefoto mmezi
Sistemụ maka ọdụ ọrụ
Akwụkwọ nnabata nnabata nke ụgbọ